တစ်ခါတစ်လေ ခံစားဖြစ်သော သီချင်းလေးတွေ...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ရင်တွင်းမှ လွမ်းနေတဲ့ အကြောင်း သူသိပါစေ...!
ခံစားရတိုင်း သံစဉ်တွေ ညည်းနေရတာ ငါ့ဘဝ...!
တမ်းတတိုင်း မြင်ယောင်နေတာ မင်းရဲ့ပုံရိပ်...!
လွမ်းတိုင်းကြည့်နေတာ မင်းရဲ့ PHOTO...!
စိတ်ညစ်တိုင်း ဆော့နေမိတာ GAME...!
မရိုးတဲ့ စကားလေးပြေားချင် "ချစ်တယ်.."...!
ချစ်သူပို့ ပေးတဲ့ သီချင်းလေး ကြာတော့ကြာသွားပြီ...
3 Response to တစ်ခါတစ်လေ ခံစားဖြစ်သော သီချင်းလေးတွေ...!
တိမ်တွေထဲလွင့်မျောတာ..အဖော်ခေါ်မှပေါ့.. စနိုးလည်း မခေါ် အောင်အောင်လည်းမခေါ်ဘူး.. ခုတော့ သီချင်းပဲနားထောင်နေတော့မယ်..
အမယ် သူလည်းလွမ်းနေပါလား ..
ဘာတဲ့လဲ မရိုးတဲ့စကားဆိုပဲ အဟမ်း အဟမ်း